Steel Xarig Wire, Accessories Xarig Wire, Hardware isdabamarinta - Thunder
XALKA ONE STOP-
Focus on horumarinta kala duwan, waxaan xiriir wanaagsan la warshad silsilado, khariban wadhfiyo warshad, warshad block khafiyad, load galalka warshad iyo warshad wax soo saarka ahama, si loo hubiyo in baahiyaha kala duwan ee macaamiisha our tayada ugu fiican iyo qiimaha tartan rasmi ah.
20 SANO KHIBRAD
Waxaan nahay in ku shubatay warshadaha labaatan sannadood. Waxaan nahay isku darka ugu fiican ee Hase yeshee, qayblibaaxna, baakadaha, adeegyada qiimaha ku daray. Bixinta kharashka tayada xal wax ku ool ah ku salaysan baahiyahaaga shaqsi aad.
"Tayada First, horeyn Customer", waxaan loo hubiyo in wax soo saarka kasta mari kormeerka gaarsiinta. Waxaan dadaal kasta si ay u bixiyaan tayada sare leh qiimaha tartan rasmi ah. Your ammaanka waa walaac.
Linyi Thunder isdabamarinta CO., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 1998, oo ku yaalla Linyi City, Gobolka Shandong. Our warshad waa qof ku taqasustay line inay ku shubatay hardware, waxaanu ka bixinaa safafka balaadhan oo ah wax soo saarka, sida clips Xadhig silig, Biro Naar ah, turnbuckles, qabsatooyinkooduna, siddo, thimbles, gacmo iyo si on.Focus horumarka kala duwan, annagu waxaannu ku dhisi xiriirka wanaagsan la warshad silsilado, khariban wadhfiyo warshad, warshad block khafiyad, load galalka warshad iyo warshad wax soo saarka ahama, si loo hubiyo in baahiyaha kala duwan ee macaamiisha our tayada ugu fiican iyo qiimaha tartan rasmi ah.
DIN741 silig Clips Xadhig
320C jillaab ISHA NOOCA US
US Nooca Ku marooji Pin barroosinka
hal la block khafiyad jillaab
Nooca Yurub Large Dee celiyaan
xerin hoos load 1500kg gal
TURNBUCKLES GANACSIGA TYPE
G80 silsilad daawaha
Chain Link, Chain Link Long , Chain khafiyad Block , isdabamarinta Hardware , khafiyad Block , qaadayso Hardware isdabamarinta ,